Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Amawayini & Imimoya » Amawayini Akhazimulayo Avela eSpain Inselelo "Abanye Abafana"
by UDkt Elinor Garely - okhethekile ku-eTN kanye nomhleli oyinhloko, iwayini.travel
I-17 min ifunde
Isithombe sihlonipha u-E.Garely
Ibhalwe ngu UDkt Elinor Garely - okhethekile ku-eTN kanye nomhleli oyinhloko, iwayini.travel
AmaFulentshi asebenzise amadola amaningi okumaketha esilungiselela ukuthi silinganise i-Champagne nezikhathi ezimnandi, ngesikhathi esifanayo esikhuthaza ukuthi sikholwe ukuthi wonke amawayini acwebileyo angesiFulentshi. Imiphumela? I-Champagne isiphenduke igama elitholakala yonke indawo. Uma sinesifiso sokufuna ingilazi yewayini elicwebezelayo ubuchopho bethu buvele bunamathele egameni elithi Champagne, bese sifaka i-oda lethu kumthengisi noma umphathi esitolo sewayini.
Eqinisweni, ngaphezu kweFrance (ukukhiqiza amabhodlela ayizigidi ezingu-550), sinokukhetha okuhlanganisa i-Italy (i-prosecco - ikhiqiza amabhodlela angu-660+/-), iJalimane (ikhiqiza amabhodlela ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-350), iSpain (Cava. +/- ikhiqiza amabhodlela ayizigidi ezingu-260 ), kanye ne-United States (ikhiqiza amabhodlela ayizigidi ezingu-162) (forbes.com). Sesibonile ukuthi iwayini elicwebezelayo liyamangalisa uma sijabule, liyamangalisa uma sidabukile, liyadingeka lapho sixoshiwe, kanye nalokho esikudingayo lapho sithola i-positive ekuhlolweni kwe-Omicron.
Ukukhiqizwa kwewayini elicwebezelayo emhlabeni wonke kukhuphuke ngamaphesenti angama-57 kusukela ngo-2002 futhi ukukhiqizwa komhlaba wonke kubalwa amabhodlela ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-2.5 okungaphansi kancane kumaphesenti angu-8 omkhiqizo wewayini usuwonke wamabhodlela ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-32.5. Okwandayo kancane yisidingo kanye nokukhiqizwa kwewayini elikhazimulayo yi-Australia, Brazil, UK, kanye nePortugal.
Iwayini Elikhazimulayo ngeSpanishi? I-CAVA
I-CAVA isho ukuthi "umgede" noma "i-cellar" lapho, ekuqaleni kokukhiqizwa kwe-cava, iwayini elikhazimulayo lenziwa futhi laguga noma lagcinwa. Abenzi bewayini baseSpain basebenzisa ngokusemthethweni leli gama ngo-1970 ukuze bahlukanise umkhiqizo weSpanishi ne-champagne yesiFulentshi. I-cava ihlale ikhiqizwa ngokuvutshelwa kwesibili ebhodleleni, futhi okungenani izinyanga ezingu-9 zokuguga kwebhodlela kumaleyisi.
UDon Josep Raventos, inzalo kaDon Juame Codorniu (umsunguli weCordorniu - omunye wabakhiqizi abakhulu be-cava eSpain), wenza ibhodlela lokuqala elirekhodiwe leCava esifundeni sasePenedes, eNyakatho-mpumalanga yeSpain. Ngaleso sikhathi, i-phylloxera (izinambuzane ezinjengentwala ezacekela phansi izivini ezikhanukela izinhlobo ezibomvu ePenedes) zashiya isifunda sinezinhlobonhlobo ezimhlophe kuphela. Ngalesi sikhathi, izinhlobo ezimhlophe zazingakwazi ukuhweba lapho zenziwe amawayini amahle amile. Lapho efunda ngempumelelo ye-champagne yesiFulentshi, u-Raventos wafunda le nqubo, wayilungisa ukuze enze inguqulo ye-Champagne yeSpanishi esebenzisa i-Methode Champenoise evela ezinhlobonhlobo zeSpanishi ezitholakalayo i-Macabeo, i-Xarello, ne-Parellada - izala i-Cava.
Eminyakeni eyishumi kamuva, uManuel Raventos waqala umkhankaso wokumaketha kulo lonke elaseYurophu ngeCava yakhe. Ngo-1888, uCordorniu Cavas wawina izindondo nemiklomelo yokuqala yegolide, wasungula idumela leSpanish Cava ngaphandle kwaseSpain.
ISpain ingumthumeli wesithathu ngobukhulu wewayini elicwebezelayo, ngemuva kancane kweFrance, ngokuthunyelwa kwamanye amazwe kuya ikakhulukazi e-United States, Germany, naseBelgium. Njengewayini elikhazimulayo laseSpain, iCava yenziwe ngendlela yendabuko ye-French Champagne. Ikhiqizwa kakhulu engxenyeni esenyakatho-mpumalanga yezwe (indawo yasePenedes eCatalonia), kanye nedolobhana laseSant Sdaurni d'Anoia okuyikhaya lezindlu eziningi ezinkulu zokukhiqiza zaseCatalan. Kodwa-ke, abakhiqizi basakazwa kuzo zonke izingxenye zezwe, ikakhulukazi lapho ukukhiqizwa kweCava kuyingxenye ye-Denominacion de Origen (DO). Kungaba mhlophe (blanco) noma rose (rosado). Izinhlobo zamagilebhisi ezidume kakhulu iMacabeo, Parellada kanye neXarel-lo; noma kunjalo, amawayini kuphela akhiqizwa ngendlela yendabuko angabhalwa i-CAVA. Uma amawayini ekhiqizwa nganoma iyiphi enye inqubo kufanele abizwe ngokuthi “iwayini elicwebezelayo” (vinos espumosos).
Ukwenza i-rose cava, ukuxuba kungu-CHA NO.
Iwayini kumele likhiqizwe ngendlela ye-Saignee, kusetshenziswa i-Garnacha, i-Pinot Noir, i-Trepat noma i-Monastrell. Ngaphandle kwe-Macabeu, Parellada kanye ne-Xarel-lo, i-cava ingase ihlanganise amagilebhisi e-Chardonnay, i-Pinot Noir kanye ne-Subhirat.
I-Cava ikhiqizwa ngamazinga ahlukene obumnandi, kusukela kowomile (imvelo ye-brut) ngokusebenzisa i-brut, i-brut reserve, i-seco, i-semico, i-dulce (emnandi kakhulu). Ama-cavas amaningi awawona amavini ngoba ayinhlanganisela yamavintage ahlukene.
Izinselelo Zokumaketha kwe-Cava
Kungani igama elithi Champagne ligeleza ngokwemvelo kangaka ezindebeni zethu, futhi iCava ingase ingabikho kusichazamazwi sethu sewayini? Iwayini elicwebezelayo elivela e-Spain limi emakethe yewayini egcwele, futhi lihlushwa isabelomali sokumaketha esinganele. AmaNtaliyane asebenzise izigidigidi zamaRandi kanye nama-Euro enza i-Prosecco ibe yingxenye ye-jargon yethu yansuku zonke, futhi iFrance ibilokhu iphromotha i-Champagne kusukela ngo-1693 (lapho u-Dom Pérignon "esungula" i-Champagne,
Abathengi bewayini abanolwazi bayazazisa izimfanelo ezitholakala ku-Cava: ukuvunwa ngesandla, ukucindezelwa kahle kwezixha emincane yokunyathelisa endaweni ephakeme; ama-lees anwetshiwe ukuguga ebhodleleni; ukukhishwa kwesandla kuma-premium cuvees; kanye nokulandela ngokwethembeka izindlela zendabuko. Ngenkathi iqembu lewayini liyazi, futhi liyazisa imininingwane, abanye "abathanda iwayini," babona iwayini elicwebezelayo
Izitokwe zamashalofu asesitolo nazo zibeka i-Cava kusimo esingesihle, ivamise ukufaka i-Cava phakathi namawayini ejeke angabizi noma imimoya eshibhile. Ama-cuvees ekhwalithi ephezulu (indawo ebekiwe, iGran Reserva, neCava del Paraje) awanayo indawo ebuchosheni babathengi bewayini, noma, uma ekhona, angase abe esigabeni sobuchopho esibizwa ngokuthi “isabelomali,” okuphoqa uCava ukuthi aqhudelane. ngewayini lesiNgisi elicwebezelayo kanye nemikhiqizo ye-Champagne engabizi.
I-Cava ikhula ngokuduma, futhi imithetho emisha ingenile ukuze kugcinwe futhi kukhuliswe ikhwalithi kwakhiwa Umkhandlu Olawulayo we-CAVA Protected Designation of Origin. Kusukela ngo-2018, u-Javier Pages uhole le nhlangano ngenkathi ephinde abe nguMongameli we-Barcelona Wine Week (umbukiso wewayini wamazwe ngamazwe waseSpain).
Yini ezofezwa yimithethonqubo? Imithetho izokhulisa izici zekhwalithi ye-Cava futhi ifake bonke abalimi bewayini nabenzi be-Designation of Origin (DO), ikhulisa umsuka omkhulu, kanye nekhwalithi.
Uma i-Cava indala kunezinyanga eziyi-18 izobizwa nge-Cava de Guarda Superior, futhi yenziwe ngamagilebhisi avela ezivinini ezibhaliswe Kurejista ethize Yebhodi Lokulawula le-Guara Superior, futhi kufanele ihlangabezane nale mfuneko elandelayo:
a. Imivini kufanele okungenani ibe neminyaka eyi-10 ubudala
b. Imivini kufanele ibe yi-organic (iminyaka emi-5 yoshintsho)
c. Isivuno esiphezulu esingamathani angu-4.9/acre, ukukhiqizwa okuhlukene (ukulandelanisa okuhlukile ukusuka esivinini ukuya ebhodleleni)
d. Ubufakazi be-vintage kanye ne-organic - kulebula
1. Ukukhiqizwa kweCavas de Guarda Superior (kuhlanganisa iCavas Reserve enezinyanga okungenani eziyi-18 zokuguga; iGran Reserva enezinyanga okungenani ezingama-30 ukuguga), kanye neCavas d Paraje Calificado - evela esakhiweni esikhethekile esinezinyanga okungenani ezingama-36 ukuguga - kumele kube yi-100% yemvelo ngo-2025.
2. Indawo entsha ye-DO Cava: Comtats de Barcela, Ebro Valley, and Levante.
3. Ukudala ngokuzithandela ilebula "Yomkhiqizi Odidiyelwe" yezinkampani zewayini ezicindezela futhi ziqinisekise amaphesenti angu-100 emikhiqizo yazo.
4. Ukuklanywa okusha nokuhlukaniswa kwe-Cava DO kuzovela kumalebula amabhodlela okuqala ngoJanuwari 2022.
I-Corpinnat. Winneries Fight for Freedom
Abanye abakhiqizi bewayini base-Spain bashiye i-DO yabo, okwenza igama lelungu elilodwa: Conca del Rui Anoia ngoba abanelisekile ngokungabi nandaba komlando kwe-Dos kwekhwalithi eyehlisa isithunzi somkhiqizo. I-Corpinnat yigama elisha phakathi kwewayini le-Spanish lekhwalithi ephezulu, elicwebezelayo, futhi abasunguli bethule uhlelo kuMnyango Wezolimo waseSpain ukuze bathole isitifiketi. Uma/uma kuvunyiwe, kuzoba ukulungiswa okumangazayo komkhiqizo we-Cava.
Ngo-2019 abakhiqizi bewayini abayisishiyagalolunye bashiya iCava DO bayokwakha iCorpinnat yewayini elimnandi elicwebezelayo. Abakhiqizi bewayini babefuna ukufaka uCorpinnat ne-DO kodwa ibhodi elilawulayo lanqaba - ngakho bahamba. Abakhiqizi bewayini banentshisekelo yokwakha iwayini eligxile ku-terroir. Ngokungafani neFrance, iSpain ayinalo uhlelo lokuhlukaniswa kwe-terroir focused, futhi abakhiqizi abancane bewayini elisezingeni eliphezulu kulo lonke elaseSpain bebelokhu becela ushintsho iminyaka. Abakhiqizi abayinqwaba abathenga amagilebhisi kunoma ubani nanoma yikuphi endaweni yabo enkulu kakhulu echazwe ngokwendawo bakhiqiza inani elikhulu lemikhiqizo yezimboni eshibhile, ebangela ikhanda, imikhiqizo yezimboni, ukuyibhala nge-DO efanayo, okwenza kucishe kungenzeki ukuthi izindawo ezincane, ze-terroir-drive zizihlukanise. .
I-Cava ayidluli ekuhlolweni okuqinile njenge-Champagne.
Lokhu kubangela iqiniso lokuthi abakhiqizi abakhulu be-cava bayakwazi ukukhiqiza inani elikhulu lewayini elisezingeni eliphansi elinesigaba esifanayo esigcoba abakhiqizi abancane bekhwalithi yewayini elihle ngebhulashi elifanayo eliphakathi. Ukungabi bikho kokulawula izinga kubangele iqiniso lokuthi isicoco esake saduma emhlabeni wonke seCava sesilahlekelwe ukuhlonishwa kanti imakethe yomhlaba wonke yewayini elicwebezelayo idlondlobala. I-Cava ilahlekelwe isabelo semakethe ku-prosecco, indlela yayo ye-charmat eyenza kungabizi kakhulu ukuyikhiqiza.
Emcimbini wakamuva wewayini waseNew York City, oxhaswe yi-European Union (Quality Wines from the Heart of Europe) ngithole ithuba lokuzwa ama-Cavas ambalwa. Kumawayini acwebezelayo atholakalayo, okulandelayo kwakuyizintandokazi zami:
1. Anna de Codorniu. UBlanc de Blancs. YENZA i-Cava-Penedes. 70% Chardonnay, 15% Parellada, 7.5% Macabeo, 7.5% Xarel.lo
Wayengubani u-Anna futhi kungani ebeka igama lakhe ku-Cava? U-Anna de Codorniu uphawuleka njengowesifazane owashintsha umlando wewayini ngobuchule bakhe, futhi ubuhle bakhe waba yiphayona lokwengezwa kwe-Chardonnay varietal emhlanganiseni we-Cava.
Uma ubuka, u-Anna wethula umbala o-blonde ogqamile nonomdlandla onokugqamisa okuluhlaza okwenza kujabulise ukuwabuka ngoba amabhamuza mahle, ayaphikelela, anamandla futhi ayaqhubeka. Ikhala lijabule ngokutholakala kwamatshe amanzi, amawolintshi awolintshi, nesithelo sasezindaweni ezishisayo esixhunywe nephunga elimnandi lokuguga (cabanga ngethosti nebrioche). Ulwanga lujabulela ukhilimu, i-asidi ekhanyayo, kanye nenjabulo ehlala isikhathi eside eholela ekuqedeni okumnandi okude. Iphelele njenge-aperitif, noma ngemifino esosiwe, inhlanzi, ukudla kwasolwandle kanye nenyama eyosiwe; ime ngokuqinile yodwa noma ihlanganiswe nama-dessert.
2. L'avi Paul Gran Reserva Brut Nature. I-Maset. 30% Xarel-lo, 25% Parellada, 20% Chardonnay.
UPaul Masan (1777) ukhunjulwa e-L'avi Pau Cava, njengowokuqala ohlwini lozalo lomndeni. Imivini emidala (iminyaka engama-20-40) itshalwe endaweni engaphansi kokuphakama okungama-200-400 m ngaphezu kwezinga lolwandle. Iwayini liguga ezinqolobaneni 5 m ngaphansi komhlabathi nokuguga okungenani kwezinyanga ezingama-36.
Iso lithola izithunzi ezisagolide, namabhamuza ahlanganiswe kahle kuyilapho ikhala livuzwa ngezithelo ezivuthwe kakhulu, amawolintshi, ama-brioche, nama-alimondi. I-palate ithola ukuzidela okomile, nokunokhilimu okuholela ekuqedeni okude, okuqhubekayo okunobumnandi obusikisela uju nama-crabapples. Hlanganisa nama-prawns nopelepele oshisayo noma uthele phezu kwama-oyster.
Ngemininingwane eyengeziwe, Chofoza lapha.
Lolu uchungechunge olugxile ku-Wines of Spain:
Read Ingxenye 1 Lapha: ISpain Iphakamisa Umdlalo Wayo Wewayini: Kakhulu KuneSangria
Read Ingxenye 2 Lapha: Amawayini aseSpain: Nambitha Umehluko Manje
© UDkt. Elinor Garely. Lesi sihloko se-copyright, okuhlanganisa nezithombe, akumele senziwa kabusha ngaphandle kwemvume ebhaliwe evela kumbhali.
Izindaba eziningi mayelana newayini
Ezolimo Barcelona Europe iyuniyani yase-Europe France Germany Italy Marketing New York City Spain I-united states Iwayini
I-UNDP Iphefumulela Impilo Entsha Ezokuvakasha ETanzania
Insangu entsha ene-carbonated
Januwari 24, 2022 ngo-08: 54
Isihloko esihle kakhulu nesiphelele mayelana nomhlaba wamawayini acwebezelayo eSpain. Ngiyabonga Dr. Elinor Barely. Yebo, ngiyavuma, ubuchopho bethu buxhumene negama elithi Champagne ngayo yonke into ecwebezelayo. Kwadingeka ngiqeqeshe kabusha ingqondo yami ukuze ngihlukanise futhi ngaqala i-cavasocials.org njengendlela yokuqala nokufunda ngamawayini acwebezelayo e-Spain CAVA kanye ne-CORPINNAT. Nakhu onyakeni ka-2022 okhazimulayo! kanye nezindatshana eziningi mayelana nokuhlukahluka kwamawayini akhazimulayo emhlabeni jikelele.